Degmada Bur hakaba oo laga furay Machad muhiimadiisa gaarka ah wata + sawiro – idalenews.com
Degmada Bur hakaba oo laga furay Machad muhiimadiisa gaarka ah wata + sawiro
Waxaa dabayaaqadii bishii tagtay ee Janaayo degmada Buur hakaba ee Gobalka Baay laga furay Mac-had logu magac daray Iqra Institute of Computer and Languages kaasoo lagu barto Luqadaha iyo cilmiga kumbuyuutarka.
Furitaanka Machadkaan isbuuc kadib ayaa ayaa noqdey mid aad umashquul badan oo ay ardeyda degmada iyo gobalka ay xiisenayaan machadkaan cusub oo macalimiin iyo aqoon ba ka duban machad yada kale ee ka furan degmada.
Ragga aasaasay machadkaan oo ka mid yahay Xuseen Aadam Yarow oo aan wax ka wareysanay Muhiimada mac-hadkaan cusub ayaa inoo sheegay iney arkeen baahida dad weyna islamarkaana ay ku talaabsadeen iney fureen mac-hadkaan kaasoo iminka noqdey kan degmada Buur hakaba loogu jecel yahay.
Idale News Online, Buurhakaba.
Booliiska oo soo bandhigay wixii laga sameeyay qaraxyadii habeenadaan Muqdisho laga fulinaye+Daawo Sawirada.
Odayaasha KG soomaaliya oo ku eedayey Beelaah Hawiye ee muqdisho Faraglin ay Ku Haayaan shirka Baydhaba.